နေကြာကြာစက်ဘီးချိုင့်သည် 2019 ရှိအားကစားလိပ်စာဖြစ်သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryaနေကြာချိုင့်စက်ဘီးအားကစားအတွက် 2019 နေရပ်လိပ်စာမူမည်
05 / 02 / 2019 54 Sakarya, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
နေကြာချိုင့်ဝှမ်းစက်ဘီး 2019 အတွက်အားကစားရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်
နေကြာချိုင့်စက်ဘီး "2019 55 လွှဲပြောင်း Orhan Bayraktar အတွက်အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်စက်ဘီးခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် Sakarya အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ချိုင့်ဆိုင်ကယ်ခြေထောက်၏စင်မြင့် finish ကိုနှင့်စတင် xnumx'nc နေကြာ turxnumx တည်ခင်းဧည်လိမ့်မည်။ မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကနေစင်မြင့်အားကစားသမားများအတွက် 2019 အရေးကြီးသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲကိုမိမိတို့အဘို့နေရာတစ်နေရာရှာအံ့သောငှါလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ Bayraktar, ကဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာကားမောင်းလေ့ကျင့်ရေးမှာစတင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာဦးစီးဌာနမှနိုင်ငံတော်သမ္မတ Orhan Bayraktar, နှစ်တွင် 2019 Sunflower ချိုင့်စက်ဘီးထွက်သယ်ဆောင်လှုပ်ရှားမှုများကိုနှင့် ပတ်သက်. အစည်းအဝေးတစ်ခုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ အားကစားဆိုင်ရာဌာနခွဲ Manager ကို Yusuf Ertugrul Erdem အတွက်အစည်းအဝေး, ကြီးကြပ်ရေးမှူး Yilmaz Facility Sunflower ချိုင့်စက်ဘီးထ 2020 ကမ္ဘာ့ဖလားတောင်ဆိုင်ကယ်ချန်ပီယံရှစ်ဒါရိုက်တာ Aziz ကSırnaçနှင့်နည်းပြရာအရပျကိုယူ။ Bayraktar အဆိုပါ 2019 နှစ်ပေါင်းယခု Sunflower ချိုင့်၌အားကစားစက်ဘီးထုပ်ပိုးဖော်ပြထားသည်။
Bayraktar, "ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုပထမဦးဆုံး 2018 အိမ်တွင်လုပ်သောတူရကီမှဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကလှုပ်ရှားမှုများ 2019 ၌အကြှနျုပျတို့၏အဆောက်အတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကအခြေခံပညာမောင်းနှင်မှု, သူတို့ရဲ့စက်ဘီးအဆင့်မြင့်ယာဉ်မောင်းကို Safe ယာဉ်မောင်းနှင့်ပညာရေး၏ကောလိပ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်ရေးကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများက4အပေါ်သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရေးပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၏လယ်ပြင်တွင်နည်းပြကိုလမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကြေညာချက်များ www.sakarya.bel.t ဖြစ်ပါသည် လိပ်စာမကြာမီထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
55 ။ Sakarya အတွက်သမ္မတအိမ်တော်စက်ဘီးခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးဇာတ်စင်
Orhan Bayraktar "တူရကီရဲ့စက်ဘီးအဖွဲ့ချုပ် (TBF) 1963 နှစ်တွင်မှအစဉ်အလာကတည်းကဖွဲ့စည်းနှစ်နှစ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးပြိုင်ကားအမျိုးအစားများဖြစ်ပါတယ် '' UCI World Tour '' 16-21 ဧပြီလ 2019 နေ့စွဲနေဆဲဖုံးလွှမ်း World Tour အကြားအမှန်တကယ်ပြိုင်ပွဲအောက်မှာဒါပေမဲ့ဒီ လွမ်းဆွတ်မှုတစ်ချိန်ကလမ်းကြောင်းအတွက်အားကစားပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရန်ပွဲဧပြီလ 16 21 2019-date ဖြစ်အောင်အကြားအရပ်ဌာနကိုယူပါလိမ့်မယ် 55 ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်စက်ဘီးခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ငါတို့မွို့တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
turxnumx ငါတို့မွို့အကြားလမ်းကြောင်း၏ Sakarya ဇာတ်စင်မှစက်ဘီးအားကစားအသင်းများနှင့်ကမ္ဘာ၏အားကစားသမားအဆင့်နေရာယူမည်ဖြစ်ပြီး6ဘေ့စနင်းထက်ပိုနေတဲ့တထောင်ကီလိုမီတာအသစ်တစ်ခုကိုစိတ်လှုပ်ရှားတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ xnumx'nc ချိုင့်၏ဆိုင်ကယ်ခြေထောက်၏စင်မြင့် finish ကိုနှင့်စတင် xnumx'nc နေကြာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ သတင်းအချက်အလက်Sırnaç Aziz က Bayraktar ၏ဘာသာရပ်အပေါ်ချန်ပီယံရှစ်ဒါရိုက်တာ, လိုအပ်သောခြေလှမ်းများလိုအပ်ချက်နှင့်အညီယူလိမ့်သူကပြောပါတယ်။
အဆိုပါ 20192အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမျိုးအတွက်
2019 အတွက်နေကြာဆိုင်ကယ်ချိုင့်အတွက်2နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံတကာပြိုင်ဆိုင်မှုအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှအရေးကြီးသောအားကစားသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့နေစရာအရပ်ကိုရှာရလိမ့်မည်သည့် Sakarya MTB ဖလား-အချက်တွေရှိပါတယ်စင်မြင့်မှာ 13 MTB မာရသွန်စီးရီး-XCM နှင့် 2019 စက်တင်ဘာလ 15 ရက်စွဲပေါ်တွင် ", 2019 စက်တင်ဘာလ UCI Bayraktar ကျင်းပကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦ၌ပြစ်မှားမိခံရဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်တိုင်ပင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤငါတို့မွို့၏အိမျတငျပွတစ်လမ်းအတွက်ပြိုင်ပွဲပြုမည်မျှော်လင့်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Bayraktar ပြောနေကြပါတယ်နေကြာချိုင့်စက်ဘီးကိုလည်းငါအားကစားသမားအတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် "တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအားကစားတည်ခင်းဧည်နေကြာချိုင့်စက်ဘီးအတွက်တစ်နှစ် 2019 အဖွဲ့အစည်းများတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါပြေးခုံပစ်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Fatih Çintimarသမ္မတ Zeki Toçoğluသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်အတွက်ပြေးခုံပစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မွို့၌ဧပြီတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်သဘောတူညီခဲ့ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sakarya Salcano BB ပန်းရေချိုးခန်း်လဲခန်းထဲမှာကော်ဖီအိမျစက်ဘီးအဆောက်အဦ၏အဖွင့်ဖွဲ့သော Bayraktar သည်, Continental ကအဖွဲ့, Salcano စက်ဘီးနဲ့စက်ဘီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမကြာမီဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။
55 ။ သမ္မတအိမ်တော်စက်ဘီးခရီးစဉ်
မှတ်တမ်းများ Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကျိုးပျက်ခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်တူရကီအတွက် zkteco ရန်လိုအပ်နေသောမဂ္ဂနာဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး,